Chivabvu 8, 2018 arun
New York Stock Exchange anogona vomurova Bitcoin wokutengesera papuratifomu
Mubereki boka New York Stock Exchange rave kushanda paIndaneti zvokutengeserana chikuva kuti aizobvumira vanoita huru kutenga uye mubatirire Bitcoin, maererano na uye nemagwaro kuonekwa The New York Times uye vanhu vana briefed pamusoro nesimba uyo akakumbira kuramba kusazivikanwa nokuti urongwa vachiri zvakavanzika.
Oracle kuti vomurova blockchain-se-a-basa papuratifomu ichi mwedzi
Software Zirume Oracle ari zvose kuisa kuti pachena vomurova ayo blockchain-se-a-basa papuratifomu ichi mwedzi. Frank Xiong, Oracle kuti boka mutevedzeri womutungamiriri Blockchain Cloud Service, akati ari pachena kuti zvakasimba ndehwokuti akwezve nezviduku yemakambani, pamwe Pricing kwakavakirwa mutengapwe vhoriyamu.
Moscow dare Mitemo cryptocurrency kunobatanidzwa kusauka kuchamuka
A dare Moscow rwave kusanganisira cryptocurrency wallets sezvo chikamu kusauka chikwereti wemunda, kuziva chikwama wacho kiyi uye mari sezvo pfuma. Nyaya yaiva kana kuziva muridzi crypto chikwama uye makiyi zvaibvira kana kwete. Dare rakatonga kuzivikanwa zvinokwanisika uye kuti kiyi inofanira aramba sechikamu chikwereti wemunda.
MuJapan Financial Se ...
Bloomberg anotangazve C ...
Court rinobvumira Mt. G...
Previous Post:12 Chinese mabhanga vaishandisa blockchain mu 2017
Chivabvu 21, 2018 pa 2:15 AM
Chivabvu 26, 2018 pa 5:30 PM
Chivabvu 28, 2018 pa 1:39 AM
Chikumi 10, 2018 pa 11:49 PM
Chikumi 12, 2018 pa 7:32 AM